भारत र अमेरिकाबीच २१ हजार करोड भारुको रक्षा सम्झौता | Ratopati
भारत र अमेरिकाबीच २१ हजार करोड भारुको रक्षा सम्झौता
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच मङ्गलबार हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तापछि दुई नेताले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
मोदीले भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशबीच ३ वर्षमा व्यापार दोहोर अङ्कमा वृद्धि भएको जिकिर गरे । द्विपक्षीय व्यापारको बारेमा पनि दुई पक्षबीच सकारात्मक वार्ता भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले ठूलो व्यापार सम्झौतामा पनि सहमत भएका छौँ । यसको सकारात्मक परिणाम निस्कनेछ । दुई देश कनेक्टिभिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकासमा पनि सहमत भएका छन् । यो दुई देश मात्र नभएर विश्वको हितमा छ । रक्षा, प्रविधि, ग्लोबल कनेक्टिभिटी, व्यापार र जनता र जनताबीचको सम्बन्धमा दुई देशबीच सकारात्मक चर्चा भएको छ ।’
उता, ट्रम्पले मोदीसँगको वार्तामा २१.५ करोड भारु बराबरको रक्षा सम्झौतालाई मन्जुरी दिइएको जानकारी दिए । दुवै देशले आतंकवादलाई समाप्त गर्न साझेदारी गर्ने र पाकिस्तानमाथि थप दबाब बनाउने सहमति भएको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
मोदी र ट्रम्पबीच प्रतिनिधिमन्डल स्तरमा भएको छलफलमा भारत–अमेरिकाबीच भएका ६ सम्झौतामध्ये रक्षा सम्झौता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ ।
अहमदाबादमा आयोजित ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले यसको घोषणा गरेका थिए ।
‘अमेरिका सन्तुलित व्यापार चाहन्छ । हामी इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न प्रतिबद्ध छौँ । दुई देश आतंकवाद खतम गर्न सहकार्य गर्नेछ,’ ट्रम्पले भने, ‘जब मैले कारोबार सम्हाले, अमेरिकाको निर्यात बढेको छ, यसका लागि मोदीलाई धन्यवाद । मेरो कार्यकालमा भारसँग ६० प्रतिशतले व्यापार बढेको छ ।’
अमेरिकासँग सी–हक हेलिकप्टर किन्ने चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । २१ हजार करोडको रक्षा सम्झौतामा १८ हजार ६२६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनसक्छ । भारतको नौसेनालाई यो हेलिकप्टर चाहिएको छ । यो हेलिकप्टरले हर मौसममा दुश्मनमाथि हमला गर्न सक्षम छ भने पनडुब्बीमाथि पनि निशाना बनाउन सक्छ । यसको अलावा भारतले अमेरिकासँग ८०० मिलियन डलरको ६ वटा एएच–६४ ई अपाचे हेलिकप्टर पनि खरिद गर्न सक्नेछ । यसको साथै अमेरिकाले भारतलाई मिसाइल डिफेन्स शिल्ड पनि बेच्ने प्रयास गरिरहेको छ । भारतले रुससँग एस ४०० मिसाइल डिफेन्स सिस्टम किन्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसका साथै भारत र अमेरिकाबीच परमाणु रियाक्टरसँग जोडिएको करार पनि महत्त्वपूर्ण छ । यस अन्तरगत अमेरिकाले भारतलाई ६ वटा रियक्टर सप्लाइ गर्नेछ ।
संसारभरी कोरोना संक्रमणले ९५ हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो
कोरोनाभाइरसका संक्रमित र मृतकको संख्या कहाँ कति बढ्यो ?
प्रहरीमा १० दरबन्दीको लागि मारामार
मस्जिदमा भीड नगर्न अनुरोध गर्न गएका असईमाथि हातपात, तीनजना पक्राउ
कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय संरचना बनाउनुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन: गृह मन्त्रालय
किन आलोचना सुन्न चाहँदैन बालुवाटार ?
दिपाश्रीले कसलाई भनिन् ‘बिहे नगरेकाहरुले पनि बुढा भनेर बोलाउनुपर्ने’
पूर्वमन्त्री विष्टद्वारा गुल्मीका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ३ सय थान पीपीई सहयोग
लकडाउन सहेरै यसरी अत्यावश्यक सेवा दिँदैछन् मोटर कम्पनीहरु
रामायणका ‘सुग्रीव’ श्याम सुन्दर कालानीको निधन
कोरोना कहरः फोर्ब्सको सूचीबाट १२ दिनमा २२६ धनाढ्य बाहिरिए, मुकेश अम्बानी १३ बाट २१ औं स्थानमा झरे
इतिहासमा आज – हारले रोकिएन हिट्लरको उदय